Top 7 món ăn ngon từ thịt thỏ và cách làm đơn giản tại nhà | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Top 7 món ăn ngon từ thịt thỏ và cách làm đơn giản tại nhà | Excitinghochiminhcity
Maererano nemishonga yokuMabvazuva, nyama yetsuro inotonhorera, inosimbisa marunda, inotonhodza ropa, inobatsira gasi, inotsvedzerera ganda, inobvisa muchetura, uye inobvisa kupisa. Inovaka muviri asi havasi vese vanoziva nezvenyama yetsuro, vazhinji vanoda kuidya havazivi kuti inogadzirwa sei kuti inakidze. Ndosaka nhasi Tikibook ichakuzivisa iwe zvinonaka zvetsuro nyama ndiro uye nzira yekubika iyi isinganzwisisike asi yakajairika ndiro.
Kana iwe uchinetseka kuti chii chaunofanira kuita kuti uchinje kuravira kwekudya kwemhuri, edza kudzidza nzira yekugadzira ndiro iyi. roti muromo unonakidza, unoshamisa unoenda.
Yakagadzirirwa-yakagadzirwa tsuro nyama: 1 chidimbu
Zvishanu zvinonaka: 2 maspuni
Nyeredzi anise: 3 petals, 1 chidimbu chidiki chesinamoni
Garlic: 3 clove duku
Kurunga: mhunga yehupfu, mainnoodles, muto wehove, mhiripiri, mafuta ekubikisa, ..
Kokonati mvura: 1 muchero
Waini yakachena: 1 tablespoon
Danho 1: Process zvinhu.
Tenga nyama yetsuro, woigeza nedoro wozoibuditsa kuti ibude. Unocheka kuita zvidimbu zvina zvenyama yetsuro kana diki zvichienderana nezvaunoda.
Garlic yakasvibiswa, yakagurwa. Chengetedza nyama yetsuro negariki yakakanyiwa, zvinonhuwira zvishanu uye mhiripiri shoma, upfu hwekurunga, muto wehove kuti uise zvinonhuwira.
Danho rechipiri: Kugadzira – Isa pani pachitofu, isa mafuta mashoma mupani womirira kuti ichipisa. Zvadaro, wedzera nyama yetsuro kuchitsuwa kuitira kuti nyama inogona kuvhimwa zvakare. Zvadaro paradzanisa nyama yetsuro mundiro. Dzorera pani kuchitofu, udira mafuta mashoma mukati, wedzera anise, sinamoni uye minced garlic kuchitsuwa kusvikira kunhuhwirira. Zvadaro, wedzera tsuro nyama kuchitsuwa.
Danho rechitatu: Kupedza – Wedzera kokonati mvura, waini yakachena uye uuye kumota pamusoro pekupisa kukuru kusvikira nyama yakanyorova. Kana iwe uchida kuti nyama ive nemuvara mutsvuku, unogona kuwedzera 1 teaspoon yevermilion kana cashew ruvara. Mirira kusvikira nyama yapfava, ona glue zvakare, wozoisazve mwaka uye woisa mundiro kuti unakidzwe. Kudya uku kunonaka nemupunga nechingwa
Yakapfuma nyama yetsuro, nekunhuhwirira kweanise, sinamoni inogutsa mhuri yako.
Tsuro nyama roti
With nyama yetsuro Pachave neakawanda akasiyana maitiro ekugadzirisa ekukubatsira iwe wakasununguka kuratidza matarenda ako. Inotevera Tikibook ichagovana newe maitiro ekugadzira yakakangwa sesame yakakangwa tsuro!
Tsuro Nyama: 1 (Sarudza murume, dema uye chena)
Bvisai tubers, yakaoma hanyanisi uye garlic
Pepper, munyu, mainnoodles, shuga,
Ginger, waini chena, ndimu, chili, banga rehupfu, herbs, coriander, Unogona kuwedzera kokonati mvura yehupfumi.
Danho 1: Kurapwa kwekutanga
Tsuro nyama Bvisa ganda, bvisa ura, geza nemusanganiswa wewaini chena uye ginger kuti ubvise kunhuhwirira kwenyama.
Kubvisa bhonzo: sefa mbabvu, bvisa femur, shin mapfupa
Slice bevels 4-5 cm rộng yakafara
Danho rechipiri: Nyama inonhuwira
Marinate pepper, munyu, mainnoodles, shuga, oyster muto, waini chena, hanyanisi, gariki, lemongrass, uye hupfu hwebanga kwemaminitsi gumi nemashanu.
Gadzirira ndiro huru ye: Mazai, hupfu, hupfu, sesame yakakangwa, inogona kuwedzera kokonati mvura yehupfumi.
Danho rechitatu: Kugadzira – Isa gango rinopisa rinopisa pa70-80 ° C, Isa nyama mundiro wosanganisa zvakanaka.Isa nhindi imwe neimwe yenyama mugango rekufiyira kusvika ratsvukira, fry ka2 kusvika crispy.Kana frying braise on low heat. , wedzera kupisa usati wabvisa. Svina mafuta, dhonza.
Danho rechina: Rongai mundiro, mwaya nzungu dzakakangwa pamusoro, Shumirai nemuriwo wemarudzi ese, Divai muto unotapira uye unovava.
READ Món Ăn Ngon Ở Hà Nội Nổi Tiếng Làm Nức Lòng Mọi Du Khách | Excitinghochiminhcity
Chikafu chinotevera chinoshanduka kuva chigadzirwa chakapedzwa.Nyama inobikwa zvakaenzana, yakapfava, isina kupiswa, inongodyiwa. Sesame inonamira zvakaenzana kunze kwenyama. Dish Yakakangwa sesame yetsuro nyama Kwete kunyanya kunetsa kana uchigadzira, ine inonaka uye isinganzwisisike kuravira iyo inozofadza kunhengo dzemhuri yako.
Yakakangwa sesame tsuro
Parizvino, kuwedzera kune nyama yemombe, nyama yenguruve kana huku, tsuro nyama zvakare isarudzo inonakidza yevakadzi vazhinji vepamba nekuti inonaka uye ine hutano, iri nyore kugadzirira uye ine mutengo unonzwisisika. Ngatidzidzei kuzviita neTikibook Nyama yetsuro yakakangwa nemashizha eremoni Kuravira kunonaka kuti mhuri yese inakirwe!
Chidya chetsuro nemuviri wezasi: 700g
Lemon mashizha: 3-5 mashizha
Lemongrass: 2 zvidimbu
Kurunga: Munyu, mhiripiri, kurunga uye MSG
Nyama yetsuro inogezeswa nemvura, yozogezwa zvakare newaini chena kuti ichenese nekubvisa hwema hwenyama yetsuro zvakanaka.
Zvadaro cheka zvidya nemuviri zvakaparadzana, shandisa banga kuti uite zvidimbu zvishoma pazvidya uye nyama yakakora, kubatsira zvinorungwa kuti zvive nekukurumidza uye nekukurumidza uye zvakaenzana kubika kana uchipisa.
Mashizha eremoni anogezwa uye akachekwa zvakanaka. Panguva imwecheteyo, tora 2 lemongrass bulbs, bvisa ganda rekare, usuke uye uzvipwanye.
Danho rechipiri: Kuchenesa nyama -Kuita kuti nyama yetsuro ipfutike nemashizha eremoni nenzira kwayo, isa nyama yetsuro mundiro huru uye uinamate nehafu yeteapuni yemunyu, 1/3 teaspoon yeMSG, hafu yeteapuni yemhiripiri, uye panguva imwe chete wedzera mashizha eremoni.. Yakachekwa zvakanaka, yakapwanyika lemongrass mundiro. Sanisai zvakanaka kuti muto upinde munyama yetsuro, fambisai kwemaminitsi makumi matatu usati wapfungaira.
Danho rechitatu: Kugadziridza
Nyama yetsuro yakarungwa inoiswa muhomwe yepurasitiki (chinyorwa chokuti bhegi rinobvumirwa kushandiswa kugadzira zvokudya) uye yakasungirirwa pamusoro pehomwe.
Gadzirira steamer nekugeza kwemvura, kumirira kuti mvura ibike, isa nyama yakaraswa yakaputirwa mumabhegi epurasitiki muhari uye steam. Munguva yekupisa, kumirira kwemaminitsi gumi kuti upfuure, wozozarura chifukidzo, shandura bhegi renyama, vhara chifukidzo uye upfure kune imwe maminitsi gumi nemaviri.
Wovhura chivharo uone kuti nyama yetsuro yakaibva here, shandisa zvimiti kuti uone kana nyama yetsuro yakapfava uye yakachena sezamu rehuku kana raibva.
Danho rechina: Isa nyama yetsuro mundiro, iratidze zvinoyevedza uye koka nhengo dzese dzemhuri kuti dzifare nazvo.
Ichi chokwadi chichava chikafu chinonakidza uye chinovaka muviri kumhuri yose, kana usati waedza, ita ikozvino kuti uzive kuti nei ichinaka. nyama yetsuro yakabikwa Izvi zvinodiwa nevakawanda!
Nyama yetsuro yakakangwa nemashizha eremoni
Tsuro nyama newaini muto Kana yakagadzirirwa nemazvo, iyi ichokwadi kuve ndiro inokuita mash.
Tsuro nyama 1.5kg
Hupfu hwegorosi: 100g
sodium glutamate. Munyu
Waini yakachena: 2 makapu maduku. Mvura girisi
Madomasi 3. Anyanisi, garlic yakaoma
Paunenge uchitenga nyama yetsuro, unoisuka, woicheka kuita zvidimbu, marinate ne pepper, munyu, kapu yewaini chena, siya kwemaminitsi makumi maviri kuti uise zvinonhuwira.
Peeled anyanisi, garlic yakapwanyika. Madomasi anoshambidzwa, anopepereswa, oiswa mbeu uye akachekwa.
Danho rechipiri: Kugadziridza
Isa pani pachoto, dira mafuta mashoma kuti fry half yehanyanisi negariki, woisa nyama yetsuro wokurunga kusvika yaita goridi, durura nyama yetsuro mupoto hombe, wodira muto wacho pamusoro penyama woita kuti ivira. .
Fry the hanyanisi yasara negariki, wedzera hupfu uye songa kusvika goridhe dzvuku, isa matomatisi uye kurunga zvakanaka, mwaka kuravira.
Isa mvura shoma padivi pehari yekubikira tsuro mugango wokurunga zvakanaka kugadzira muto. Kana muto wavira, dururira muhari yenyama yetsuro woramba uchibika kusvika nyama yapfava.
Kana nyama yakabikwa zvakakwana, dururira girasi rewaini chena rakagadzirirwa mukati maro, kubika nemafuta, uye kushumira kupisa.
READ Khu dã ngoại Trung Lương | Excitinghochiminhcity
Nyama yetsuro Iyo ndiro yakabikwa zvakakwana, yakasanganiswa nemuto, yakasvibirira muvara, inonaka mukunaka, pakati nepakati uye inoyevedza. Inoshandiswa nechingwa kana vermicelli noodles ichave inonaka uye inonaka.
Tsuro nyama newaini muto
Kutevedzera civet nyama haichashamisi kune vazhinji veVietnamese. Iwe unofanirwa kujairana neiyo fake civet dish yakagadzirwa kubva kunguruve. Saka ndiro fake nyama yetsuro Wakambozvinzwa here kana kuti wakazviedza? Sezvimwe zvidya zvekutevedzera civet, fake civet tsuro zvakare haigone kushaikwa zvakajairwa zvinonhuwirira senge galangal, batch, shrimp paste, nezvimwe, asi zvakagadziriswa nenzira yakasarudzika. Nhasi, ngatidzidzei kubika neTikibook nyama yetsuro yakabikwa fake civet zvakakosha izvi!
1 tsuro (inenge 1 kg kusvika 2 kg)
Garlic, lemongrass. Galangal, batch, shrimp paste
Kurunga: ma noodles makuru, zvinonhuwira, mhiripiri, muto wehove, nezvimwe.
Mushure mekutenga nyama yetsuro, unofanirwa kuigeza, shandisa munyu wakachena kuti ukwire kumativi enyama yetsuro kuti ubvise kunhuhwirira (kuchengetedza nguva mukugadzirisa kwekutanga, zvakanakisisa kusarudza nyama yakagadzirira yakagadzirwa).
Wobva waputira foil, woiisa pachitofu chegasi kuti utendeutse ganda rekunze reyero, kubika iyo fake civet ichave yakanyanya kunaka.
Shandisa banga rinopinza kuti uparadzanise nyama, cheka muzvikamu zvakakura. Garlic yakasvibiswa, yakashambidzwa lemongrass, yakagurwa zvinhu zvose, yakacheneswa galangal, isa mudiki blender.
Danho rechipiri: Marinesa nyama – isa nyama mundiro hombe, marinate negariki, lemongrass, zvinonhuwira, ma noodles makuru, 1 spoon yehove sauce, batch spoon, 2 spoon shrimp paste, galangal. Marinate kwemaminitsi makumi matatu kuti zvinonaka zvipise.
Isa nyama mupani huru, simbisa-fry kusvikira nyama yakasimba. Wobva waisa mvura shoma wosiya ipfuhwira kusvika nyama yapfava.
Ninh kwemaminetsi angangoita 30, unorungazve kuravidza, wapedza dhishi renyama yenhema yetsuro. Bvisa mundiro, shumira uye unakidzwe.
Nyama yetsuro yakapfava, nyama inotapira uye kunhuhwirira kutsva, uye shrimp paste inokwana kuita kuti iwe udonhe. Kutevedzera nyama yetsuro Kudya nevermicelli itsva kuchave kunoyevedza.
Nyama yetsuro yakabikwa fake civet
“Yekutanga yakagochwa, yechipiri yakakangwa, tam yakakangwa, ina yakabikwa” – chirevo chevanhu chakasimbisa kunaka kwakasiyana kwechikafu chakagochwa. Ndicho chikonzero ndiro Tsuro Yakagochwa neMasitadhi izita ratisingagoni kufuratira!
Tsuro hombe uye diki yakakodzera nhamba yevanhu kuti vadye (inofanira kutenga mhando yakatogadzirwa kuchengetedza nguva mukugadzirisa).
Mashizha anonhuhwirira, 10 clove yegariki ine peel on
Waini yakachena: 200ml
READ Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh ngon ngất ngây | Excitinghochiminhcity
Danho 1: Preliminary processing of ingredients – Nyama yetsuro inosiiwa yakazara, unobvisa matumbu mukati, wogeza nemusanganiswa wewine jena neginger kubvisa kunhuwa kwenyama (zvese usageze nemvura yakachena, zvinoita kuti nyama iwedzere. fishy )
Danho rechipiri: Kugadziridza.
Isa 80g yemasitadhi mundiro, isa munyu mushoma, mhiripiri zvinongokwanirana nekuravira kweanodya.. muchoto. Pisa ovheni kusvika kumadhigirii 180.
Bika kwemaminetsi angangoita gumi, woburitsa tsuro woiisa patireyi, wozora kamafuta emuorivhi pamuviri wetsuro, wozodzosera muchoto kwemamwe maminitsi gumi nemashanu.
Wedzera kuchoto 10 clove yegariki neganda, mashizha anonhuhwirira, 200ml yewaini yakachena uye gadzira mamwe maminitsi makumi maviri kuti ashandiswe.
Iwe unogona zvakare kugocha pamoto wemarasha, nyama yetsuro ichave inonaka, asi pane ganhuriro yekuti nyama inenge yakaoma, saka paunenge uchigocha gadzira mvura shoma yakasanganiswa netsuro zvinoenderana neresipi inotevera: 1 chidimbu cheMaggi cube kana 2 tablespoons soup, 200ml emvura inopisa, mafuta emuorivhi mashoma, sanganisa zvakanaka wotsvaira muviri wetsuro.
Iwe unogona zvakare kuputira muviri wetsuro nedumbu rakachekwa renguruve kuti nyama isaoma. Mumamiriro okunze anotonhora, gara uye inwa chikafu mustard roast tsuro, Zvakanaka kuva newaini inonhuhwirira neshamwari.
Tsuro Yakagochwa neMasitadhi
Nyama yetsuro yakakangwa chikafu chinonaka, chinoyevedza kunakidzwa. Kana usati wambozviedza, zviite ipapo ipapo, kugadzirisa kuri nyore asi kuravira kwakanyanyisa kukosha.
Tsuro nyama: 700g
Yakagadzirira grated kokonati: 100g (unogona kuitenga pamusika)
Onion: 1 girobhu.
Buffalo horn chili: 1 muchero
Condiments: oyster muto, soup poda, frying mafuta, curry powder.
Nyama yakachena yetsuro inosvinwa newaini uye ginger kuti ibvise kunhuhwirira kwehove, yosuka. Kana yakagezwa nemvura, nyama yetsuro inenge iine hove. Wosefa mapfupa nenyama muzvikamu zviviri zvakasiyana wobvisa.
Anyanisi anoshambidzwa, akachekwa kuita wedges uye akanyikwa mumvura, obva adonhedzwa. Zano: isa hanyanisi mufiriji kwemaminetsi angangoita makumi matatu woicheka kuti isatsva maziso.
Buffalo horn chili inoshambidzwa, yobvisa dzinde nembeu mukati, ndokucheka kuita zvidimbu zvakarumwa zvine diagonal. Garriki yakapedzwa, yakagezwa lemongrass nemvura, yakapwanyika uye minced.
Geza copra woisa mundiro, wodira mvura inodziya zvishoma mukati, mosvina muto wacho kusvika wanzwa muto wabuda, wosvina wasara.
Danho rechipiri: Marinesa nyama – Isa nyama mundiro, marinate nechipunu cheoyster sauce, teaspoon yecurry powder, minced garlic nezvimwe zvinonhuhwirira, fambisa zvakanaka, marinate kwemaminitsi makumi matatu.
Danho rechitatu: Kupedza – Isa pani pachitofu, isa mafuta. Zvadaro, unoisa garlic, lemongrass, uye chili mupani yemafuta anopisa uye soya kusvikira yashanduka yero uye kunhuhwirira kwakasimba, wobva wawedzera nyama yetsuro yakakangwa kuchitsuwa. Wedzera seasoning kuravira. Mirira kusvikira nyama yaibva, zvino inogona kushandiswa.
Cherechedza kuti haifaniri kubikwa nyama yetsuro Kwenguva yakareba, inorasikirwa nekuravira kwenyama uye kuita kuti nyama inzwe yakaoma kana yadyiwa. Zvakanakisisa pakuwedzera nyama, unofanira kubvongodza zvakanaka uye nokukurumidza.
Nyama yetsuro yakakangwa
← Bãi Kỳ Co Quy Nhơn | Excitinghochiminhcity
Lạc trôi với top 3 vườn hoa hồng Đà Lạt nổi tiếng nhất | Excitinghochiminhcity →